Tag: nlele email email Gmail | Martech Zone
Tag: Gmail Chrome previu
Tuesday, August 16, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Gini mere o jiri buru ihe mwepu email? Dabere na 2015 Email Data Quality Trends Report nke Experian, 73% nke ndị ahịa kwuru na ha nwere nsogbu na nnapụta email. Usoro nloghachi ekwuola na ihe karịrị 20% nke email ziri ezi na-efu. Obi abụọ adịghị ya, ụlọ ọrụ achụmnta ego na-enwe nsogbu na nnapụta, nke ahụ na-emetụtakwa akara ala. Ruo ọtụtụ afọ, Returnzọ nlọghachi abụrụla onye ndu ụlọ ọrụ na oghere nnabata email na-enweghị nnukwu asọmpi, ma ọ bụrụ na ọ bụla. Na mbata nke 250ok, na a